Vivo – AsiaApps
Vivo NEX ရဲ့ Dual Display ကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ???
December 18, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on Vivo NEX ရဲ့ Dual Display ကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ???
အသစ် အဆန်းတွေ ကို အမြဲတမ်း ရှေ့ပြေးအနေနဲ့ ဖန်တီးပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ Vivo ဟာ အခုတစ်ခေါက်မှာလည်း Dual Display (မျက်နှာပြင်နှစ်ခု) ဆိုတဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့ တီထွင်ချက်တစ်ခု ကို ဖန်တီး ပြုလုပ် ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။…
In-display fingerprint sensor နှင့်အတူ Notch ပုံစံ တစ်မျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Vivo ရဲ့ V11
September 6, 2018 September 6, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on In-display fingerprint sensor နှင့်အတူ Notch ပုံစံ တစ်မျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Vivo ရဲ့ V11
Vivo က သူ့ရဲ့ အမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ V11 အကြောင်းကို တရားဝင် ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ Vivo ရဲ့ generation အသစ်ဖြစ်တဲ့ V11 က ဒီနှစ်အစောပိုင်းတုန်းက ထွက်ခဲ့တဲ့ V9 နောက်မှထွက်ရှိလာမယ့် ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။…
HTC, Samsung, Honor, Nokia တို့အပါအဝင် Smartphone ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများက သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို Android ရဲ့နောက်ဆုံး Version ဖြစ်တဲ့ Oreo အဆင့်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိအောင်ပြောင်းလဲနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ထုတ်ကုန်တော်တော်များများကိုကိုက်ညီမှုရှိအောင်ပြောင်းလဲနေပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ Asiaapps မှာလည်း…
Vivo အနေနဲ့ Under-diplay fingerprint feature ပါဝင်တဲ့ X20 Plus version ကို မကြာသေးမီကကျင်းပခဲ့တဲ့ CES ၂၀၁၈ မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Fingerprint ပါဝင်တဲ့ X20 Plus version အသစ်ကိုတော့ ဇန်နဝါရီလ…